Momba anay - Shanghai P&Q fanazavana Co., Ltd.
Shanghai P&Q Lighting Co., Ltd. natsangana tamin'ny 2005 dia mpanamboatra jiro matihanina amin'ny fanariana maty, tsindrona plastika ary vy.
Mivoatra avy amin'ny kely iray ka lasa lehibe kokoa miaraka amin'ny ozinina fanariana maty sy fivoriambe ao Haining tsikelikely. Milina fanariana maty avy amin'ny 200 taonina ~ 800tons. Manambola hatrany amin'ny fitaovana vaovao izahay mba hiatrehana ny fanamby amin'ny fanatsarana hatrany, ary hanome hatrany ireo vahaolana mety indrindra amin'ny filan'ny mpanjifanay rehetra.
Ny P&Q dia tsy misy tsindrona plastika sy vy vita amin'ny metaly, fa mety manome ampahany amin'ny tsindrona plastika sy vy koa arakaraka ny takian'ny mpanjifa.
Ary izany dia noho ny fitsipika fototra telo izay ifanarahanay amin'ireo taona matihanina amin'ny jiro, ny fahamarinana amin'ny mpanjifa ary ny andraikitsika amin'ny tenantsika. Noho ireo antony ireo ihany dia azontsika tsikelikely ny fahatokisan'ny mpanjifanay ary natsangana fiaraha-miasa mahafinaritra sy maharitra amin'ny orinasa malaza iraisam-pirenena eran'izao tontolo izao, toa ny Braums Australia, Pierlite, Gerard Lighting Group, SYLVANIA, LENA Lighting, LUG Light Factory , sns.
Ny fitaovantsika manamboatra fototra dia ampidirina mivantana avy any Taiwan.
Hery R&D matanjaka
Ireo injeniera efa za-draharaha dia afaka manampy amin'ny famahana olana samihafa mandritra ny famolavolana sy ny famokarana.
Vokatra novokarin'ny orinasa P&Q ISO9001 nahazo fankatoavana henjana ny fivoarana amin'ny fifehezana ny kalitaon'ny Amerika, Aostralia ary ny fenitra eropeana.
Fivorian'ny P&Q Factory
Jiro P&Q natsangan'i Frank Ji, lainga any Songjiang, Shanghai
Ny P&Q dia miara-miasa amin'ny mpanamboatra jiro lehibe indrindra any Australia, Gerard Lighting Group.
Niorina ny atrikasa famonoana maty P&Q. Factory ISO9001 voamarina.
P&Q maty casting ary fivorian'ny fivoriambe dia nifindra nankany Haining, Zhejiang,
Famokarana sy fitantanana manomboka ny P&Q miorina amin'ny rafitra ERP.
Izahay dia manam-pahaizana manokana amin'ny famolavolana fitaovana fanonganana ho an'ny fanapahana sy famolavolana ireo faritra. Ity fitaovana ity dia manatsara ny fitoviana ary mamela ny fahazoana fepetra takiana amin'ny refy tsy mila filàna mihodina fanampiny.
Fitsaboana manokana arakaraka ny fepetra takiana sy ny fizotrany manaraka.
Efitra fanamainana tsara amin'ny alàlan'ny vibration mahery sy vy mitifitra basy manao izay azo atao mba hahatratrarana farany ambony kalitao.
Ny P&Q dia mitantana asa fanatanterahana manokana hafa
(fonosana, famolahana, sns.), miaraka amin'ny fiantohana feno amin'ny kalitao sy ny vokatra farany.
Asa mahafinaritra izay natolotry ny ekipanay ho an'ny mpanjifanay!